This page displays news from the community on the ongoing development news and plans for the future. It contains news from government endeavors, NGO's and community self-efforts.
Gure Dhamole April 30, 2012: Magaalo Madaxda Guradhamole (Haro Dibe) oo Telefoon lageliyey:
Waxaa maanta si rasi ah ugu beeray khadka telefoonda aan xariga laheyn (Mobil phone) magaalo madaxda degmadda Gura Dhaamole ee Haro Dibi. Niska danbe ee maanta waxaa naga la soo xiriiray dhowr qof oo uu ka mid ayahy ku simaha Xafiisaka maamulka deg. G/Dhaamole Xasan Maxamuud Kurey islamarkaana ah madax Xafiiska biyaha degmadda. Waxaa kale oo nalasoo xiriiray wakiilka Haydaa Pastoralist Concen Sahal Macallin Cali oo jooga Hara Dibi.
Waa arin aad loogu farxo madamma bulshadu ay aad ugu baahneed adeegan xasaasiga ah. Inta Qurbaha joogta waxaa fursad unoqon inay si toos ah ula xiriiraan degaankooda iyo eheladoodaba. Waxaa mahad gaar ah mudan Maamulka degaanka Soaamlida iyo dawlada Federaalka Itoobiya.
Warkan waxaa soo gudbiyay Xildhibaan Cabdi Cabdullahi Xuseen iyo Ugass Maxamed Ugass Gurre .
Gure Dhamole April 25, 2012: Magaalo Madaxda Guradhamole (Haro Dibe) oo nalgelin ka socoto:
Maamulka Dawlad Degaanka Soomallida oo la kaashanaysa xaafiiska Federaalka ee Nalgelinta Itoobiya ayaa ka wada hawl nalgelin ah magaalada Haro Dibe. Nalgelinta oo bulshada degaanku kaalin weyn ka qaadatay ayaa si hufan socda islamarkaana ku dhow gabagabo. Waxaana la filayaa in nalka la sii daayo mudo kooban gudaheeda. Muuqaalka Shaqada One> Two> Three>
Degaanada Gure oo howlo muhiim ah ka socdaan.
1. Magaalo madaxda degmada G/Baqaqsa oo leedh lagelinayo - Magaalada Geldima waxaa ka socda hawl balaaran oo leedh galin ah sida, Dhismaha guriga matoorka, taagida tiirarka xargaha leedhka xambaara iyo hawlo badan oo kale oo leedh gelinta la xiriirta. Marka shaqaadani dhamaato waxaa la filayaa in ay magaaladu yeelan doonto meherado ganacsi oo casri ah.
2. Seele Godayo oo bulshadu wado baaburr u dhistay - Qabalaha Seele Godayo oo ka tirsan degmada Gura Dhamole oo meel go'doon ah ku tiilay ayaa ayaa bulshada meesha ku noolii ay iskooda u qardeysatay wado baabur oo masaafadeedu gaarayso in ka badan 60 km. Hwashan oo qaadatay mudo sanad ka badan waxaa horseed u ahaa oo Xoolo badan ku bixiyay Cali Cadde oo gudoomiyena u ah centerka Seele godeya.. Arintan reer seele godaye ku guuleysteen waxay inoo xaqiijinaysaa in horumarku uusan ahayn wax gacan dowladeed keliya laga sugayo oo maashino waaweyn oo keliya lagu qaban karo, balse gacanta dadkana wax weyn lagu qaban karo.
1. Magaalo madaxda degmada Gura Dhamole oo nal joogta ah.
Wararka inaga soo gaaraya dadka ku nool magaalo madaxda degmada Gura Dhamole ayaa sheegaya in shaqaale ka socda Wakaalda Xooga Korontada ee dowlada Federaalka ee Itoobiya ay tageen magaalada Haro Dibe si ay u qorsheeyaan hawlaha nal gelinta magaalada todobaadkii aan soo dhaafnay. Maamulka degmadda iyo dhamaan shacab weynaha degmada ayaa ku soo dhaweeyay shaqaalahaa gacmo furan iyo farxad.
Waxaana maamulka degmada iyo dadweynuhuba ay go'aansadeen inay kaalin weyn ka qaadan doonaan hwashaas iyaga oo la garab taag hiil iyo hooba shaqaalaha hawsha loo soo diray. Maamulka iyo dadweynuhuba waxay balan qaadeen inay si degdeg ah u hagaajiyaan wadada u dhaxeeysa Jibri iyo Haro Dibe si baabuurta qalabka dhismaha wada ay si fufud u maraan. Waa war dhamaan bulshada degaanka aad u farxad geliyay. Waxaa mahad baalaaran leh Maaulka Dawlada Degaanka Soomalida Itoobiya oo guntiga dhiisha isaga dhigay horumarka bulshadan mudo badan u haraadsaneed horumarks.
2. Degmada Gorobaqaqsa oo suuq xoolaad laga furay
Warar aan ka soo xiganay masuuliyiin iyo shicib degmada ku nool ay tibaaxayaan in Magaala madaxda degmad Gorobaqaqsa laga furay suuq xoolaad xooladhaqatada degaanku ay aad ugu diirsadeen. Suuqan waxaa abaabulkiisa iska lahaa dad waxgarad ah oo degaanka u dhashay, ganacsato iyo maamulka degmada. Furitaanka suuqu wuxuu ka danbeeyey magaalada oo yeelatay biyo nadiif ah oo joogta ah. Arintani waxay durbadiiba dhalisay in nolosha magaalada waxweyn iska bedeleen oo heerka ganacsigu kor u kacay.
Waxaa kale oo la saadaalinayaa in maamulka degmadu dakhli badan ka heli doono canshuurta laga qaadayo suuqa xoolaha iyo ganaacsiga kaleba. Haseyeeshe faaidada ugu badan waxaa helaya xooladhaqaatada degaanka oo xoolahooda meel safar iyo maasaafo dheer loo maraynin suuq ugu helay, islamarkaan beeca xoolahana hatan si wanaagsan uga gorgortami kara oo haddii qiimaha ay ku qanci waayaan xaradooda ku cishanaya tasoo aan hortii suragal u ahaan jirin.